सगरमाथा आरोहण: दिवङ्गत भारतीय महिला आरोहीको कीर्तिमान योजना |
प्रकाशित मिति :2019-05-27 12:40:00
उनी बिहिवार दिउँसो १२।३० बजेतिर नेपालका ग्याल्बो तामाङ र पेम्बाछिरीसँगै सगरमाथाको शिखरमा पुगेका उनीहरूको आरोहण व्यवस्थापन गर्ने ड्रिमर्स डेस्टिनेशन ट्रेक्सले जनाएको छ।
भारतकी कल्पना दाश, नेपालकी कान्छीमाया तामाङ र चीनकी लियामु मा सामेल त्रिदेशीय महिला टोलीको ध्येय ूआपसी मैत्रीभाव र महिला सशक्तीकरणूको सन्देश फैलाउनु थियो। उनीहरूको टोलीलाई नेपाल सरकारले ुनेपाल भ्रमण वर्ष २०२०ु लेखिएको एक तुल पनि दिएको थियो।
नेपाली शेर्पा सहयोगीको साथमा ५२ वर्षीया कल्पना दाश सगरमाथाको शिखर पुगिन्। ‘उनको सहयोगीहरूका अनुसार कल्पना शिखरमा पुगेर निकै उत्साहित बनिन् र रमाइन्,’ सगरमाथा आधार शिविरमा खटिएका पर्यटन मन्त्रालयका सम्पर्क अधिकृत ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने।
तर उनको खुशी धेरै बेर टिक्न पाएन। उनी शेर्पाहरूको सहयोगमा तल फर्किँदै थिइन्। तर शिखरबाट तल झर्ने क्रममा चौथो शिविरभन्दा माथि नै करिब ८,००० मिटरको उचाइमा कल्पना दाशले ज्यान गुमाएको बताइएको छ ।
‘उनको शरीरमा कुनै पनि तागत नभएर एनर्जी लसु भएर उनको ज्यान गयो,’ सम्पर्क अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिँदै भने। त्रिदेशीय टोलीमा रहेका चिनियाँ र नेपाली महिला आरोहीहरू भने सफल आरोहणपछि आधार शिविर फर्किएको उनले बताए।
कल्पना दाशको योजना के थियो ?
गत वैशाख ३ गते काठमाण्डूबाट सगरमाथातर्फ लाग्नु अघि कल्पना दाशले बीबीसीलाई आफ्नो गोप्य योजना सुनाएकी थिइन्। त्यो होस् सगरमाथाको शिखरमा पुगेर सारी लगाउने।
उनले भनेकी थिइन्, ‘मैले अस्ट्रेलियाको सर्वोच्च शिखर (कोशिउज्को) मा पनि सारी लगाएको थिएँ। म यसपटक सगरमाथाको शिखरमा पुगेर सारी लगाउँदै छु।’
सारी लगाएर के सन्देश दिन खोज्नु भएको होरु भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनेकी थिइन्, ‘सारी भारतीय र यस क्षेत्रका अन्य देशका महिलाको पहिचान हो । म सारी लगाउने महिलाले जस्तो सुकै कठिन काम पनि गर्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु।’
‘तर,’ उनले सचेत गराउँदै भनेकी थिइन्, ‘यो कुरा अहिलेलाई गोप्य नै राख्नु होला। समाचारमा नलेख्नु होला। म सफल भएपछि मात्र लेख्नु होला ।’
उनका आरोहण सहयोगीका अनुसार उनले आफ्नो त्यो धोको पूरा गर्न सकिनन्। ‘त्यहाँ माथि कसरी सारी लगाउने ? उनलाई माथि टुप्पोमा पुग्न नै साह्रै मुश्किल परेको थियो,’ दाशका आरोहण सहयोगी फुर्वा तेन्जिङ्ग शेर्पाले बीबीसीलाई बताए ।
ओडेशाकी कल्पना दास (दायाँ) शिखरमा सारी लगाउने योजनामा थिइन् । आधार शिविरमा खिचिएको तस्बिर
भारतमा दुस्ख व्यक्त
उनको मृत्युको खबरप्रति दुस्ख व्यक्त भइरहेका छन् ।
यसपालि भने उनी सफल भएर पनि असफल भइन् । उनी फर्किन असफल भइन् ।
सम्पर्क अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार उनी र अन्य दिवङ्गत आरोहीका पार्थिव शरीरलाई शिखर क्षेत्रबाट काठमाण्डू ल्याउने प्रयत्न भने अझै जारी नै छ । सुरेन्द्र फुयाल/बीबीसी नेपाली सेवा